Filohan’ny Za’gasy Nisy nanafika tao Toliara
Nanao antsoavo amin’ireo tompon’andraikim-panjakana ao Toliara ny filohan’ny fikambanana Za’gasy sahy mandroso, Jean Navandahy Ratiharison,
manoloana ny voina nahazo azy sy ny fianakaviany tao an-toerana. Tonga teto Toliara ny tenako sy ny ankohonako, hoy izy, ny Alarobia maraina tamin’ny 1ora ary nivantana teny Mahavatsy II izahay. Tsy afaka niditra tao an-tokontany ny fiara ka najanona teo amoron-dalana ambadiky ny tranonay. Tokony tamin’ny 4 ora dia nisy 5 lahy tonga teo amin’ny fiara. Ny roa nitam-basy ary nanambana sy nanery hanokafana ny fiara. Lasan’izy ireo tamin’izany finday, hoy hatrany ny fitantarany. Misy manararaotra izao vanim-potoana tsy ahafahana mivezivezy amin’ny alina izao ny mpanao ratsy, hoy izy, ka angatahana ny hanaovana fidinanana ifotony na “patrouille” amin’ny alina, indrindra, eny Mahavatsy II, izay misy azy ireo.